नेपाल आज | किन सकेनन् भुवनले श्रीमति रिझाउन
बिहिबार, ०५ जेठ २०७९
कभर स्टोरी मनोरञ्जन मेरो परिवार मेरो कथा
किन सकेनन् भुवनले श्रीमति रिझाउन
बिहिबार, २० जेठ २०७३ गते प्रकाशित - नेपाल आज (MG)
न बुढो भएपनि मन बुढो हुंदैन भन्ने उखान नायक भुवन केसीलाई मिल्ने देखिन्छ । ६० बर्ष पुग्दापनि भुवन केसी युवती र महिलासंगको सम्बन्धका कारण चर्चामा आइरहन्छन् । अचम्म त के भने स्त्री पट्याउन सिपालु यि नायक सम्बन्ध टिकाइरहन भने कमजोर सावित भइसकेका छन् । भुवनले औपचारिकरुपमा दुईवटा श्रीमती बनाए । तर, दुबैले उनको घरबार छोडे ।
सन् १९५७ मा जन्मिएका भुवनको रंगमञ्चको यात्रा गायकका रुपमा भएको थियो । रेडियो नेपालका गायक भुवनको जागे सारा रात बोलकोे गित हिट थियो । पछि उनलाई गायनले भन्दा अभिनयले तान्यो । हयाण्डसम भुवनलाई सुपरहिट हुन धेरै समय लागेन । करोडपति, नेपाली बाबु, साइनो, कुसुमेरुमाल, चिनो, दक्षिणा, कन्यादानजस्ता चर्चित चलचित्रमा उनकै प्रधान भुमिका छ । उनको फिल्मस् दर्शकले ताने । उनको व्यक्तित्वले थुप्रै युवती तानेको उनी आफैं स्विकार गर्छन । तर, उनले आफ्नै श्रीमतीलाई रिझाउन सकेनन् । मागी र भागी दुबै विवाहको स्वाद लिएका उनले परिणाम एउटै भोगे –सम्बन्ध बिच्छेद । धेरैको बुझाइमा परस्त्रीसंगको उनको सम्बन्धले घरकी स्त्रीको मन फाटेको हुनुपर्छ ।
नायिका सारंगा श्रेष्ठले भुवन केसी नभएको भए धेरै नायिका कुमारी नै हुन्थे भनि दिएको अन्र्तवार्ताले भुवनको स्वभावलाई धेरै हदसम्म झल्काउछ । अहिले त भुवनको सम्बन्ध चर्चामा रहन्छ । दिनउमेरमा दिनहुं केही न केही आइरहन्थ्यो । यस्ता खबरले श्रीमतीको मन जलाउंथ्यो । दुनियांको दिलमा बसेपनि भुवनले जीबनसाथीको दिल राख्न सकेनन् । प्रसंग शुरु गरौं बिजया केसीबाट । पहिलो पत्नी थिइन् विजया मल्ल । मागी विवाह भएको थियो । भुवन र बिजयाको जोडी जमेकै थियो ।
दुई सन्तान जन्मिसकेका थिएः काजल केसी र विवेक केसी । छोरी काजलको नाममा भुवनले काजल फिल्मस् ब्यानरको स्थापना नै गरेका थिए । सानो परिवार खुशी परिवारजस्तो थियो । तर, रहेनछ । बिजयासंग सम्बन्ध बिच्छेद भयो । बिजया छोरा विवेकसंग अमेरिकामा बस्दछिन् । सुस्मिता बमजनसंग बिहे भुवनको दोस्रो विवाह दार्जलिङकी सुस्मिता बमजनसंग भयो । कला क्षेत्रमा यो जोडी निकै जम्ने देखिएको थियो । अहिलेका चकलेटी नायक अनमोल यही जोडीका सन्तान हुन् । सुस्मितालाईपनि भुवनको परस्त्रीप्रतिको कामवासना रुचीकर लागेन । भुवनको बानी सुध्रिन सकेन । अन्ततः उनलेपनि डिभोर्स गरिन् । भुवन भन्छन्,‘सुस्मिताले नै डिभोर्स मागेकी हुन् । म फेरीपनि उनीसंग रहन चाहन्छु । तर एक हातले ताली बज्दैन ।‘
पूर्वपत्नी सुस्मिता र भारतीय व्यापारी रोहण जैसवालसंग अफयेर्सको चर्चा चल्यो । घरमा श्रीमती हुंदाहुंदै अरुसंग अफर्यस् गर्ने भुवनलाई डिभोर्स भइसकेकी श्रीमतीको अफर्यस्ले चित्त दुखायो । बदला नै सही, उनले शर्मिला ढंगोललाई प्रेमिका बनाएको भन्ने चर्चाले कलिउडलाई तरंगित पा¥यो । कोटेश्वर चोकमा शर्मीलाको पतिले उनलाइ पिटेको भनिएको सन्दर्भ मिडियामा सनसनीपूर्ण बन्यो । पछिल्लो समयमा उनको नाम जिया केसीसगँपनि जोडियो । जिया एकदम मिल्ने साथी मात्र भएको उनी बताउँछन्् । छोरा अनमोलप्रति युवतीको क्रेज बढेको छ । तर, स्याल तन्नेरी बाघ बुढो हुंदैन भन्ने उखानलाई प्रमाणित गर्ने प्रवृत्ति भुवनमा देखिएको छ । उनी अहिलेपनि आफुमा जोश रहेको बताउंछन् । ६० लागेका बुढा भुवन १६ बर्षे ठिटोझै भन्दछन्, ‘हिरोलाई केटीले र हिरोइनलाई केटाले पछ्यानन् भने ति हिरो हिरोइन नै होइनन् ।’
भुवन केसीले कैयौं चलचित्रमा आर्दश पतिको भुमिका निर्वाह गरेका छन् । चरित्रवान पुरुषको भुमिकामापनि उनी देखिएका छन् । तर, जीबन र अभियन उही हुने भए बुढेशकालमा भुवन बुढीहरुसंग छुट्टिएर कहां बस्नुपथ्र्यो र ? नतोडिएसम्म सम्बन्ध कांचजस्तै टलक्क टल्किने गर्दछ । तर, हरेक सम्बन्ध जोखिममा हुन्छ कांचजस्तै । जुनसुकै बेला टुक्राटुक्रा भइहाल्न सक्छ । कांचको दुनियांका सुपरहिट भुवन केसीको बहुबिछोड यसै भन्दैन र ?
bhuwan kc divorce nepali film Sushmita Bamjan
असल नेतामा यस्ता गुण हुन्छन्
सोमबार, २६ बैशाख २०७९
छविसपाथिभेरामा गठबन्धनले एमालेभन्दा तीन गुणाबढी मत ल्याउने विश्लेषण, यस्तो छ तथ्य
आइतबार, २५ बैशाख २०७९
प्रधानमन्त्रीसँग नायिका खड्काको चाप्लुसीः मेरो त ब्लडमै कांग्रेस छ
बुधबार, २१ बैशाख २०७९
पूर्वसचिव उपाध्यायले बालेनलाई ‘मस्जिद र चर्च’ मा जाउ भनेपछि...
आइतबार, १८ बैशाख २०७९
वरिष्ठ पत्रकारको खुलासाः बालेन साह पूर्वराजाका मान्छे हुन
मङ्गलबार, ०३ जेठ २०७९
रवि लामिछानेसम्मको साथ पाएका बालेनलाई आफ्नैबाट धोका
मङ्गलबार, २० बैशाख २०७९
सुनिता डंगोल विज्ञ भएर ५ वर्षसम्म महानगरपाकिलामा के गरिन् ?
बिहिबार, १५ बैशाख २०७९
विजय जुलुस सकिएपछि वर्दिवासमा कहाँबाट आयो सिलसहितको मतपेटिका ?
२२औं पटककमा अधिकृत पासः राजिनामा दिएर मेयर लडे, पाए १४८ भोट
ओलीलाई आफ्नै वडा जोगाउन मुस्किल, दमकमा राप्रपा अगाडि
धरानमा पनि स्वतन्त्रको जगजगी !
करेन्ट चाउचाउको उदाहरणिय काम : किसानदेखि उपोभोक्तासम्मलाई राहत